Posted on 08/04/19 1:28 by Eager Communications Group Co.,Ltd
Assistant Technician (ကျား) (၁၀) ဦး. မည်​သည့်​ဘွဲ့ရမဆ်ို ​လျှောက်​ထားနိုင်​သည်​။(အ​ဝေးသင်​ တတိယနှစ်​ ​ဖြေဆိုပြီး ​ကျောင်းသားများလည်း ​လျှောက်​ထားနိုင်​သည်​) . ​နေ့အဆိုင်း / ည အဆိုင်း အလှည့်​ကျ ဆင်းနိုင်​ရမည်​။ (အလုပ်​ချိန်​ ၈ နာရီ​ကျော်​ပါက Overtime ​ကြေး ခံစားခွင့်​ရှိမည်​။). နယ်​ထွက်​နိုင်​ရမည်​။ (နယ်​ထွက်​ရပါက ​Daily Allowence / Operation Allowence ခံစားခွင့်​ရရှိမည်​။). နားရက်​ (တစ်​ပတ်​လျှင်​ တစ်​ရက်​)
စိတ်​၀င်​စား၍ ​လျှောက်​ထားလိုပါက [email protected] သို့ ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
More jobs from Eager Communications Group Co.,Ltd